गल्ती स्वीकार्नुहोस् ‘तपाईँको हार कहिल्यौं हुँदैन’ — Motivatenews.Com
गल्ती स्वीकार्नुहोस् ‘तपाईँको हार कहिल्यौं हुँदैन’
काठमाडौं – ‘जब म गल्ती गर्छु, त्यतिवेला मलाई यति शक्ति आओस् कि आफैलाई परिवर्तन गर्न सकूँ । अनि जब म सहि काम गरिरहेको हुन्छु यतिवेला मलाई यति शक्ति आओस् कि ममा अहङकार नपलाओस् ।’ यो सोच लियौं भने हामीलाई जीवनमा व्यवहारीक हुन सहज हुन्छ । कोही मानिस सिक्दै जान्छन र सहज जीवन यापन अपनाउँछन । कोही भने सहज जीवन अपनाइरहेका भएपनि केही सिक्ने क्षेमता राख्दैनन् ।
गल्ती हुनु नराम्रो होइन । गल्तीबाट सिक्ने अवसर पाइन्छ । तर ठूलो गल्ती त्यसबाट सिक्न नसक्नु पो हुन्छ । आफ्नो गल्तीका लागि अरुलाई दोष दिने र बहाना बनाउनु उचित होइन । आफ्नो गल्ती महसुस भएमा त्यसको जिम्मेवार स्वीकार गर्नु र माफी माग्नु नै उचित हुन्छ । त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु हुँदैन । किन ? किनभने तपाइँले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु भयो भने अर्को व्यक्ति सहृदयी बन्नेछ ।
अलिकति होशियार हुने हो भने तर्क पन्छाएर हृदयमा पर्ने चाप कम गर्न सकिन्छ । तर्क वितर्क हुँदा विजय हुने अचुक उपाय त्यसलाई वास्ता नगर्नु हो । तर्क नै गरिएन भने जित्नुपर्ने झण्झट नै हुँदैन । तर्र्क त्यस्तो कुरा हो जुन कहिल्यौ जित्न सकिदैन ।
यदी तपाईँले जितिहाल्नु भयो भनेपनि हार्नुहुने छ, हार्नुभयो भने त सिधै हारिहाल्नु भयो । त्यो कसरी ? कसरी भने तपाईँले कुनै तर्कमा जित्नुभयो भने राम्रो जागिर, ग्राहक, साथी वा बैवाहिक सम्बन्ध गुमाउनु पर्ने हुन्छ । यी कुरा गुमाएर प्राप्त हुने विजयलाई तपाईँ कस्तो विजय मान्नु हुन्छ । यो जित त खोक्रो हुन्छ । तर्क वितर्क झुटो अहङ्कारले आउने कुरा हो ।
तर्क गर्नु हार निश्चित भएको युद्ध गर्नुसरह हो । यदी कसैले जितिहात्यो भने पनि त्यसको लागत विजियभन्दा बढि पर्न जान्छ । तर्क गर्नु अह्म पर्दशन गर्नु हो र चिच्याउन होड मात्र हो । मैले सबै कुरा जानेको छु भन्ठान्ने व्यक्ति ठूलो मूर्ख हो । यो भन्दा पनि ठूलो मूर्ख त्यो हो, जो उसँग बहस गर्न तम्सन्छ ।
२०७७ साउन २२ गते प्रकाशित